Rafitra fiasa hafa ho an'ny fitrandrahana nomerika | Avy amin'ny Linux
Rafitra miasa ampiasaina amin'ny fitrandrahana nomerika.
Amin'izao fotoana izao eo amin'ny haavon'ny solosainan'ny trano sy ny birao (birao, finday na solosaina finday) ampiasaina matetika, Ny Operating Systems (OS) be mpampiasa indrindra dia ny MS Windows, Mac OS ary Linux, ao amin'io lamina io ihany araka ny lanjany sy ny fizarana tsena tratra. Noho izany, MS Windows sy Mac OS, amin'ny alàlan'ny default, dia mitana ny safidin'ny mpampiasa mahazatra sy ankehitriny raha ny momba ny fampiasana solosaina an-trano na birao ho an'ny lahasa Digital Mining dia mampiasa CPUs sy GPU.
Ary na dia mety ho an'izany aza ny MS Windows sy Mac OS, Linux dia manolotra fahombiazana tsara kokoa amin'ny fitaovana namboarina ho azy raha toa ka voalamina tsara. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny Operating Systems mifototra amin'ny Linux azo alaina ho an'ny Digital Mining isika.
1 Inona ny atao hoe Digital Mining
2 Inona avy ireo rafitra fiasa mifidy sy be mpampiasa indrindra amin'ny fitrandrahana nomerika?
3 Inona avy ireo endrika hafa momba ny fitrandrahana nomerika?
Inona ny atao hoe Digital Mining
Ny teny na andianteny «Cryptocurrency Digital Mining »dia matetika ampiasaina hanondroana ny famahana ny sakana iray, manamarina ny fifanakalozana rehetra ao anatiny, izany hoe, ny Digital Mining no dingan'ny famoahana (famoronana) cryptocurrency vaovao (bitcoins na altcoin) eo an-tsena amin'ny taha napetraky ny algorithma sy ny teknika voafaritra ao amin'ny famoronana azy ireo.
Saingy amin'ny lafiny midadasika dia manondro ny fomba tsirairay na ny fiasa izay ahafahana mamorona crypto sy / na azo. Raha ny momba anay dia hianarantsika ny Rafitra miasa ampiasaina amin'ny fitrandrahana nomerika amin'ny fitaovana manokana sy / na natokana ho an'ny solosaina (RIG, ASIC ary solosaina).
Inona avy ireo rafitra fiasa mifidy sy be mpampiasa indrindra amin'ny fitrandrahana nomerika?
Anisan'ireo malaza sy be mpampiasa indrindra ny:
EasyMine dia sehatra lozisialy feno sy mahaleo tena amin'ny fitrandrahana cryptocurrency. Natao izy io mba hanaovana ny dingana rehetra amin'ny fametrahana sy fitantanana ny toeram-pitrandrahanao ho toy ny intuitive sy mivantana araka izay tratra. Na vaovao vao haingana ianao na veterana amin'ny teknolojia blockchain, dia hankasitrahanao ny fanamorana ny fampiasana, ny fifehezana ary ny fahafaha-manaony izay omen'ny Operating System toy izany.
Anisan'ireo tombony azony ny:
Mora ampiasaina: Izy io dia OS tsotra sy mora ampiasaina hananganana sy hampandehanana ny milina fitrandrahana anao manokana. Tsy mila fahalalana manokana.
Vonona ny hampiasa: Izy io dia vahaolana feno sy azo ampiasaina avy hatrany izay tsy mila fanamboarana tanana. Samy namboarina sy nohavaozina ny fitaovana sy rindrambaiko.
Mizaka tena: Izy io dia rafi-pandinihan-tena manan-tsaina izay manara-maso tsy tapaka ny fitaovana ary manitsy ny masontsivana miasa.
Mahasoa: Ny fitantanana ny tantaram-pitantanana feno, miaraka amin'ny refy fampiasana angovo, dia manampy amin'ny fanombanana sy fampitomboana ny tombom-barotra ao amin'ny toeram-pitrandrahana.
EOS no Operating System voalohany izay manolotra maritrano blockchain amin'ny famolavolana azy, mamela ny fikajiana avo lenta sy marindrano ny fampiharana itsinjaram-pahefana., ary ny fananganana rindranasa ao anatiny. Manome kaonty, fanamarinana, tahiry, serasera tsy misy ifandraisany ary fandaharana amin'ny programa amin'ny CPU sy / na clusters CPU marobe.
EthOS dia OS 64-bit mifototra amin'ny Linux izay toeram-pitrandrahana (mine) Ethereum, Zcash, Monero ary vola hafa azo fitrandrahana GPU hafa. Ny Altcoins namboarina niaraka taminy dia azo amidy ho azy (ho takalo) ho Bitcoin.
Manolotra fanavaozana etos maimaimpoana ho an'ny ain'ny vokatra.
Manohana hatramin'ny GPU NVIDIA 16, GPUs 13 AMD RX, ary GPU 8 AMD R7 / R9.
Manohana vola marobe, toy ny Ethereum, Zcash, Monero, ary maro hafa.
Avelao ny fanamboarana amin'ny alàlan'ny adiresy IP amin'ny alàlan'ny tranonkala.
Manohana ny rindrina mafy sy ny rindrina maivana rehetra.
Mihazakazaka amin'ny sehatra an'arivony izy io miaraka amina singa samihafa an'arivony.
Mamela ny fitantanana lavitra ny Fitaovana sy ny singa sasany.
Maivana be izy io ary mandeha amin'ny CPU maoderina sy RAM 2GB indrindra.
Manolotra fiarovana mahery setra GPU.
Manolotra fikirakirana mandeha ho azy sy manan-tsaina ny sosona tsara indrindra ho ahy.
Izy io dia manana Panel Web miaraka amin'ny antontan'isa antsipiriany momba ilay sehatra.
Izy io dia miaraka amin'ny Easy KVM sy BIOS flashing function, hiasa tsy misy Mouse sy flash BIOS.
Manana fanombohana haingana ny Operating System sy ny lozisialy momba ny harena ankibon'ny tany
Manolotra tontolo iainana CPU sy Diska ambany izy io.
Hive OS dia Operating System izay manolotra sehatra fitantanana azo antoka hampiasa ny fitaovanao ary hanamboatra, hanara-maso ary hitantana ny fitrandrahana harena ankibonao. Ity sehatra ity dia manohana ny AMD sy ny Nvidia GPUs ary ny Bitmain ASIC (S9, A3, D3, L3 +), amin'ny toerana iray daholo.
Fametrahana haingana be.
Fitantanana ifotony ao amin'ny Ivotoerana fanaraha-maso tokana.
Fanaraha-maso ny hashrates, ny toeran'ny Internet, ny lesoka GPU, ny fanjifana herinaratra, ankoatry ny zavatra hafa.
Mora miditra haingana amin'ny fitaovana lavitra sy haingana izy.
Fampandrenesana afovoany amin'ny pejy tokana, azo ovaina isaky ny vondrona, ary amin'ny fanaraha-maso an-tsaina ny hashrates
Mpitrandraka GNU / Linux Izany dia GNU / Linux Distro noforonina (noforonina) tamin'ny fanaovana a Ubuntu 18.04 respin Amin'ny alàlan'ny fampiharana System miverina. amin'ny fomba azo ampiasaina tsara amin'ny Internet na amin'ny tsy misy ary ho an'ny karazam-bahoaka rehetra, indrindra ny Video-players (Gamers), na dia eo aza ny fironana lehibe amin'ny fianarana sy ny fampiasana ny Digital Mining. Tsy eo an-dalam-pandrosoana intsony izy io ankehitriny, fa ny mpamorona azy kosa dia namorona antso hafa FAHAGAGANA, maimaimpoana tanteraka koa ary azo sintonina maimaim-poana, nohamarinina ho an'ny Fitrandrahana nomerika, fa natao (noforonina) tamin'ny fanaovana a MX Linux 19.04 respin Amin'ny alàlan'ny fampiharana MX Snapshot.
Ny solosaina ihany no azo apetraka (taloha na maoderina) miaraka amina processeur 64 Bit (CPU).
Azo ampiasaina ho rafitra miasa (Distro) ho an'ny trano na birao.
Azo sintonina maimaimpoana tanteraka ao amin'ny famoahana azy Kandidà Vidéo 2.
Azo sintomina amin'ny alàlan'ny fanomezana mialoha ao amin'ny Stable Version 1.0.
Rindrambaiko 1 fitrandrahana harena an-kibon'ny tany misy interface interface sary ary 3 tsy misy interface interface
Kitapom-bola Cryptocurrency 5.
Rohy an'arivony ao amin'ny menio tsoratadidy (Webapps)
Mpijery Internet 5
Hita amin'ny Candidate Version 2 (RC-2) izy izao
Modernity sy mifanentana avo amin'ny Hardware sy Software isan-karazany.
Fahamarinana, fahafaha-mitondra ary haavon'ny personalization avo lenta
Dual tontolo iainana XFCE (Mazava sy mandeha) + Plasma (Tsara tarehy sy matanjaka)
Fampiasana sy fametrahana mora amin'ny solosaina ambany, salantsalany na avo lenta.
Ary fampiharana maro efa napetraka mialoha toa ny VirtualBox, Genymotion, Telegram, Messenger Facebook, Whatsie, Signal, Franz, sns.
Ny PiMP Operating System dia sehatra azo entina mitrandraka harena ankibon'ny tany, izay lohalaharana amin'ny lozisialy ho an'ny fitrandrahana nomerika ankehitriny. Noho izany, io no fenitra ho an'ny famolavolana ireo sehatra fitrandrahana harena an-kibon'ny tany hatramin'ny Linux hatramin'ny nanombohany ny taona 2012. Rehefa vita ny fametrahana dia vonona ny hiasa ho toy ny sehatra fitrandrahana matihanina izy io, miaraka amin'ireo rindrambaiko sy fitaovana ilaina hiasa rehetra. na fantaro raha vaovao amin'ny fitrandrahana nomerika ianao.
Izy io dia manohana karazam-bola crypto isan-karazany, anisan'izany ireo farany, ary manohana algorithma, mpitrandraka, ary fitaovana fitrandrahana harena ankibon'ny tany maro koa izy.
Manome fanaraha-maso mora sy fanaraha-maso ny asa fitrandrahana harena an-toerana na lavitra anao.
Manolotra fampiasana mora dia tsara ho an'ny mpampiasa vaovao na ny matihanina amin'ny haavon'ny fitaovana matanjaka ao aminy.
Ity Operating System ity dia lohalaharana hatrany amin'ny teknolojia fitrandrahana dizitaly vaovao sy ny fampiasana ny crypto amin'ny alàlan'ny tontolon'ny fitaovana Raspberry Pi, Banana Pro, Pine64 + ary IoT, izay manome vahaolana maimaimpoana ho an'ireo mpankafy Internet (IoT), Developers, ary Mpampiasa.
Fanavaozana tsy tapaka ny vokatra eo amin'ny sehatry ny Security, Blockchain, Teknolojia tohanan'ny ary ny rafitry ny rafitra.
Fahazavana avo lenta amin'ny fidirana sy fampiasana ho an'ireo mpampiasa farany.
Haavo ny fanohanana sy ny fikirakirana ny vola crypto.
Ny fampidirana sy ny fanohanana mitohy ny Wallet, ny lozisialy momba ny harena ankibon'ny tany, ny endri-javatra sy ny fotodrafitrasa mifototra amin'ny fanehoan-kevitra sy sosokevitra avy amin'ny vondron'olona mpampiasa azy amin'ny ambaratonga sy karazany rehetra.
Izy io dia miaraka amin'ny mpanjifa Bitcoin feno node feno.
Manome ny mpampiasa traikefa "Out of the Box" tsara indrindra sy mora indrindra.
SimpleMining OS dia rafitra fandidiana natokana ho an'ny Digital Mining izay tena mora ampiasaina. Mila misintona, manavao, manamboatra mailaka fotsiny ianao hahazoana miditra ary manomboka azy hanombohana mitrandraka ireo Cryptocurrencies tohanan'ny. Azo ampiasaina maimaim-poana izy amin'ny fiandohan'ny fametrahana saingy mila fandoavana ny fampiasana azy, izay farafahakeliny $ 2 isaky ny Fitrandrahana harena ankibon'ny tany isam-bolana.
Azo apetraka amin'ny kapila (HDD, SSD na Pendrive).
Fanohanana ny GPU NVIDIA sy Radeon AMD R9 200/300 / RX400 / RX500.
Fanohanana ny DHCP amin'ny tamba-jotra LAN, na dia tsy manohana WIFI aza ny rafitra.
Tabilao fitantanana mora sy mora (Dashboard) azo alefa amin'ny mailaka.
Izy io dia ahitana programa mitrandraka mihoatra ny 20 izay mandrakotra ny ankamaroan'ny algorithman an'ireo Altcoins manan-danja sy fanta-daza.
Ny tahan'ny fampidirana sy fanavaozana ny programa sy ny fampiasa.
Fiaraha-monina mpampiasa tsara sy lehibe izay mizara ny fahalalany sy ny olany.
Inona avy ireo endrika hafa momba ny fitrandrahana nomerika?
Anisan'ireo fomba na fomba mahazatra indrindra hamoronana sy hahazoana cryptocurrency, izay tsy milaza mivantana ny fametrahana sy ny fampiasana ny rafitra miasa natokana na tsy ho an'ny fitrandrahana nomerika, miavaka ity manaraka ity:
Ny fampiasana ny lozisialy momba ny harena ankibon'ny tany amin'ny Browsers.
Ny fandraisana ireo milina virtoaly ao anaty rahona.
Ny fampiasana ny Mpanafoana Link Web.
Fandraisana anjara amin'ny fanolorana vola voalohany (ICO).
Fandraisana anjara amin'ny tolotra vola madinika (Airdrop).
Ny fividianana / fivarotana Cryptocurrencies ao amin'ny tranon'ny fifanakalozana sy / na ny fifanakalozana stock.
Ny fividianana / fivarotana entam-barotra amin'ny Cryptocurrencies.
Ny fanatanterahana ireo lahasa: Toy ny fanatanterahana asa Transcription, Translation, Surveys, Post.
Manatanteraka serivisy matihanina: Izy io dia mandrakotra ny Publications, Consulting ary ny asa an-tserasera ho an'ny kaomisiona misy asa matihanina na tsia.
Mahazo vola na valisoa amin'ny hetsika: Ahitana hetsika fialamboly sy Faucets amin'ny doka, Captchas ary Recaptchas.
Ny valisoa amin'ny referral: Ny fandoavam-bola amin'ny fahazoana sy / na fanangonana referral amin'ny Taps na serivisy web hafa.
Manantena aho fa amin'ity lahatsoratra ity dia handinika ny tsirairay amin'ireo rafitra fiasa noresahina ianao ary zarao ny hevitrao sy ny hevitrao amin'ity publication ity hanatsarana azy bebe kokoa ary hizara amin'ny fahalalantsika sarobidy momba an'io raharaha io.
Na dia nanolo-kevitra ity lahatsoratra bilaogy teo aloha ity aza izahay: Avadiho ho lasa Operating System ny GNU / Linux anao mety amin'ny Digital Mining ho famakiana famenony.
Avy eo amin'ny famoahana amin'ny ho avy dia hijery bebe kokoa momba ny sasany amin'izy ireo isika ary hiditra ao amin'ny PROs sy CONS, Advantages ary Disadvantages. Amin'izao fotoana izao, azonao atao ny mitsidika ny pejy ofisialin'ny tsirairay amin'ireo tetikasa Operating Systems for Digital Mining amin'ny alàlan'ny fanindriana ny anaran'ny tsirairay voalaza eto hahafantaranao azy ireo voalohany.
Mandra-pahatongan'ny lahatsoratra manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Rafitra fiasa hafa ho an'ny fitrandrahana nomerika
NO dia hoy izy:
Lahatsoratra iray tena ilaina sy feno, na dia afaka mihalalina aza ny zava-drehetra ary antenaiko fa, azavaina tsara amin'ny hevitro io. Salama.
Misaotra betsaka noho ny hevitrao. Ary eny araka izay azo atao dia hanitatra zavatra sasany izahay satria tsy Blog natokana ho an'ny Digital Mining fa amin'ny Free Software, noho izany dia manarona kely ity lafiny ity!
Yuriy nakatov dia hoy izy:
Salama, novakiako ny lahatsoratrao ary tiako ho fantatra ny fiovan'ny toe-javatra nanomboka teo ary raha mbola azo atao ny mitrandraka amin'ny PC na tsy mampiasa serivisy birao. Ary inona no cryptos hotolorana anio. Misaotra amin'izay azonao atao.
Valiny tamin'i Yuriy Nakatov
GNU / Linux Distribution Repositories: Ny kanto amin'ny fanangonana azy ireo!